Update: Mid ka mid ah Wasiirada Puntland oo geeriyooday – HalQaran.com
Update: Mid ka mid ah Wasiirada Puntland oo geeriyooday
Garoowe (Halqaran.com) – Wasiiru dowlihii Madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland, Maxamed Xasan Ciise ayaa Subixii Sabtida maanta ah ku geeriyooday Isbitaalka Qaran oo ku yaallo Magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland.
Madaxtooyada Puntland, ayaa xaqiijisay geerida marxuumka, waxaana ka tacsiyeeyay Ku simaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan (Axmed Karaash).
Marxuumka ayaa maalmihii u dambeeyay ku xanuunsanaa magaalada Garoowe, kadib markii ay Neefsashadu ku adkaatay, waxaana isla saaka la doonayay in loo soo qaado dhanka magaaalada Muqdisho.
Xilka Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Puntland waxaa loo magacaabay 21-kii October 2019, waxaana uu Xafiiska hayay mudda sagaal bilood iyo maalmo ah.
Marxuumka ayaa lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Garoowe ee Xarunta dowlad goboleedka Puntland.
Tags: Garoowe, Wasiir ka tirsan Puntland oo geeriyooday
Shirkii Dhuusamareeb 3 oo dib u dhac ku yimid & Wararkii ugu dambeeyay
Ciidanka Xoogga dalka oo 33 Carruur ah ka soo bad-baadiyay Al-Shabaab, kuwa wareejiyay…